राम जन्मभूमि अयोध्यापुरीमा के-के हुँदैछ ? – DIVAKHABAR.COM
राम जन्मभूमि अयोध्यापुरीमा के-के हुँदैछ ?
admin 08/08/2020 1 min read
‘पुरातत्विक विभागसँग समन्वय गरेर अध्ययन र संरक्षणमा जुट्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ’, सुवेदीले भने। हालको वडा नम्बर ९ यसअघिको अयोध्यापुरी गाउँ विकास समितिमा पथ्र्यो। यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले माडीका नगर प्रमुखसहितका प्रतिनिधिलाई भेटवार्ता का लागि आज बालुवाटार बोलाएका छन्। माडी नगरपालिका प्रमुख ठाकुर ढकालले प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार भेटघाटका लागि बोलाएको जानकारी दिए ।
Previous पहिलो श्रीमानबाट एक करोड, दोस्रोबाट ४५ लाख लिएर तेस्रोसँग अमेरिका
Next पद होइन जनताको भविष्य सुनिश्चित गर्ने र विकास गर्ने जिम्मेवारीमा हामी छौं